कोरियामा तातो हावाको प्र’कोप आउँदै, कहिले आउँदैछ? जानिराखौं। – Eps Sathi
July 14, 2021 821
दक्षिण कोरियामा अर्को हप्ताको सोमबारबाट बर्षा याम अ’न्त हुँदैछ। तर अर्को हप्ता बर्षायाम अ’न्त भएसँगै कोरियाको तापक्रम बढ्ने भएको छ। तापक्रम बढने कुरा कोरियाको मौषम विभागले बुधबार जानकारी दिएको छ। कोरिया मेटोरोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसनले जुलाई १८ र १९ तारिखमा हुने बर्षासँगै यो बर्षको बर्षायाम अ’न्त हुने बताएको छ।
कोरियामा गत हप्ताबाटै गर्मीले स’ताउ’न थालेको छ। गत हप्ताबाटै बर्षासँगै तातो हावा बहन थालेपछी गर्मी अ’त्या’धिक बढ्न थालेको हो। कोरियाका अधिकाँस ठाउँका रातको समयको न्यूनतम तापक्रम समेत उच्च रहन थालेको छ। न्यूनतम तापक्रम नै रातको समयमा २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहन थालेको छ। कोरियाको राजधानी सउलमा गत सोमबार राति २३ डिग्री न्यूनतम तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ।
यो हप्ताको अन्तसँगै बर्षा सुरु हुने र अर्को हप्ताभरी बर्षा हुने बताइएको छ। त्यसपछि सिजनल बर्षा सकिन्छ भने त्यसपश्चात कोरियामा तातो हावाले स’ता’उने बताइएको छ। अहिले अमेरिका र क्यानाडामा जुन महिनादेखि नै तातो हावाले स’ता’इरहेको छ। “जुलाई १९ तारिखपछि कोरियामा तातो हावाको प्र’को’प देखा पर्नेछ।” कोरिया मेटोरोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसनले बताएको छ।
यस बर्षको तातो हावाको प्र’को’प सन २०१८ को भन्दा पनि श’क्ति’शाली हुने अ’नुमान गरिएको छ। करिब १ महिनासम्म कोरियन प्रायद्विपमा तापक्रम उच्च रहनेछ। जुलाईको मध्यबाट अगष्ट महिनाको अन्तसम्म कोरियालाई तातो हावाले स’ता’उनेछ। यस अवधिमा राजधानी सउलको तापक्रम ३९.६ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने अनु’मान गरिएको छ। “उच्च तापक्रम यस अघि सन २०१८ को जस्तै हुनेछ। तर सन २०१८ मा जतिकै लामो समय यो प्र’को’प रहन्छ रहन्न त्यो भने अनुमान गर्न अलि गा’ह्रो छ। यसको पूर्वानुमान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने डाटाहरु संकलन भइरहेको छ।” कोरिया मेटोरोलोजिकल एडमिनिस्ट्रेसनले जानकारी दिएको छ। (कोरियाटाइम्स)
Prevयोङ्गीनबाट भालु भागेपछि खोजी कार्य तिब्र
Nextविश्वकै उत्कृष्ट बस्न लायक शहरमा कोरियाको राजधानी सउल पनि, हेरौं कति औं स्थानमा पर्यो?
कोरियाले लागू गर्दै कडा नियम, अब ६० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर उडान गर्नुपर्ने